ဒိုးမယ် - Page5of 38 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
ဆောင်းဦးလည်းရောက်ပြီနော် ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။မနက်ပိုင်းတွေဆို အအေးဓာတ်လေးကလည်း ပိုလာပြီနော်။ ဒီလိုရာသီအကူးအပြောင်းကာလတွေမှာ ရာသီအလိုက် အသီးအနှံတွေကလည်း ပေါများလာတာကို တွေ့နေရစမြဲပါပဲ။ နှစ်တိုင်းမှာတွေ့နေရပေမဲ့လည်း ဘယ်တော့မှလည်းရိုးမသွားပါဖူး။ မျှော်ပြီးအရသာခံစားသုံးရတာက ကြည်နူးမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ အသီးအနှံလေးတွေအပြင် ဘယ်လို အလွယ်ဆုံးစားရမလည်းပါ ဖော်ပြပေးထားလို့ သိပ်ခေါင်းစားစရာ မလိုပါဖူးနော်။ ကီဝီသီး စျေးကြီးတာကစရေးတယ်ဆိုပြီး...
ငှက်ပျောသီး၏ အသုံးဝင်ပုံ (၅) မျိုး
ဒိုးမယ် ကိုနေ့စဉ်အားပေးဖတ်နေကြတဲ့ ကိုကိုမမများ ဌက်ပျောသီးမှာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်လဲ ဆိုတာပြောပြရင် အံ့သြသွားမယ်ထင်တယ် ။ ဌက်ပျောသီးက ၁၂ ရာသီ ပေါ်နေတဲ့အသီးပါ ။ သဘာဝကပေးထားတဲ့လက်ဆောင်လို့လဲပြောလို့ရသလို လူတွေကိုလဲအလွန်အကျိုးပြုပါတယ်။ ၁. ခုခံအားကောင်းစေခြင်း ဌက်ပျောသီးကို နေ့စဉ်ပုံမှန်စားခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ အစာအာဟာရ ကိုအလွန်ရရှိနိုင်ပါတယ်...
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကို လူတော်တော်များများစိတ်ဝင်းစားကြတဲ့အတွက် လူစည်ကားတဲ့နေရာမှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေသိဖို့လိုပါတယ်နော်။ဖွင့်ပွဲမှီချင်ရင် ညနေ ၃နာရီကတည်းက စထွက်ပါ။ ၁. အသားကပ်အကျီၤ အဝတ်အစားတွေကို လုံလုံခြုံခြုံလေး ဝတ်ပြီး အသားကပ်အကျီင်္နဲ့ အနွေးထည်ကိုလဲ ထူထူထပ်ထပ်လေး ဝတ်သွားစေချင်ပါတယ်နော် တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်က ကွင်းထဲမှာ ဆိုတော့ ပိုပြီး အေးမှာ မို့လို့ပါ...
Homemade ကြက်ဥ Cheesy Sandwich
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဆန်းဝှစ်ပေါင်မုန့် (၁) ထုပ် ထောပတ် ချိစ်ပြား (၁)ထုပ် ကြက်ဥ (၁) လုံး ဂေါ်ဖီထုပ် မုန်လာဥနီ ဆား သကြား ငြုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ဂေါ်ဖီ နှင့် မုန်လာဥနီကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ပါးပါးလှီးပါ။ ပြီးလျင်...
ဒီပဝါလီပိတ်ရက် အိမ်မှာ ထူးထူးခြားခြားဘာတွေလုပ်စားကြမလဲ
ဒိုးမယ်ကိုအားပေးနေတဲ့ အကိုအမတွေကို ဒေပဝါလီ နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မုန့်လုပ်စားနည်းလေးကိုပြောပေးပါမယ်နော်။ ၁. ဂျုံဌက်ပျောကြော် ဂျုံမုန့် 200 gm ကို မိမိလိုသလောက်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်ပါ ။ ဌက်ပျောသီးကို စိးစီးလေးဖြစ်နေအောင်ချေပေးပါ ။ ဆားနှင့်သကြားကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း3ဇွန်းဆီအချိုးကျထည့်ပေးပါ ။...
အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေကို စားသုံးတဲ့ အလေ့အထဟာ အာရှတစ်ခွင်မှာ တော်တော်လေးတွေ့ရပါတယ်။စာရေးသူတို့ မြန်မာမှာဆိုရင် ပိုးဟပ်စားတဲ့ အလေ့အထကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ သမရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အင်းဆက်တွေစားတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်အင်းဆက်တွေကို ဘယ်လိုစားကြလည်းဆိုတာ ဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ ဘန်ကောက်ညစျေးမှ အင်းဆက်အစုံကြော် ဘန်ကောက်ရောက်ခဲ့ရင်...
ဒိုးမယ်ကို အားပေးနေကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးများ မင်္ဂလာပါနော်။ ယခုအခါမှာ အလွန်ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကြောင့်စိတ်တွေမွန်းကြပ်ပြီး စိတ်မပျော်ရွှင်တာတွေ စိတ်ညစ်တာတွေရှိနေတယ်ဟုတ် အဲ့အချိန်မှာ အသီးအနှံတခုခုကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ကို relax ဖစ်ရုံသာမက စိတ်ဖိစီးတာတွေပါ အကုန်လျော့ပါ သွားပါတယ်။ အသီးအများစုအနက့် ဖရဲသီး ရဲ့ တန်ဖိုးအကြောင်း ကိုပြောပြ ချင်ပါတယ်။ ဖရဲသီးကို...
အခွံ နွှာထားတဲ့ ဟာတွေကို ဘယ်လို ပြန်သုံးကြမလဲ
ဒိုးမယ်ကိုအားပေးနေကြတဲ့ထဲမှာ အိမ်ထောင်ရှင်မမ တွေကိုကိုတွေပါမယ်ထင်တယ် ။ အိမ်ထောင်ရှင် တွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ မီးဖိုချောင် မှာအသုံးပြုပြီးသားပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့နည်းကို share ချင်ပါတယ်နော် ။ အိမ်မှာ ပန်းအိုးလေးတွေ စိုက်နေတဲ့သူဆိုရင် အသီးတွေနွာပြီးလို့ပိုတဲ့အခွံတွေကို မြေသြဇာအဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် ။ အသုံးပြုနည်းလေးကတေ့ာနွာ ပြီးသား အခွံတွေကို...
ဘန်ကောက်ရောက်ရင် မဖြစ်မနေ စားရမဲ့အစားအစာ (၅) မျိူး
အခုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကြောင့် ရွာတစ်ရွာလိုတောင်ကျဉ်းလို့နေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကိုတောင် အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်လို သွားလာလို့ရအောင် အကုန်အကျ သက်သာတဲ့ အပြင် သွားလာရတာကလည်း မခက်ခဲတော့ပါဖူး။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ဘန်ကောက်ကို အလည်သွားတဲ့ သူတွေ တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ဘန််ကောက်မြို့ကို...
သီတင်းကျွတ်မှာ ဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေနဲ့ လူကြီးတွေကို ကန်တော့မလဲ
ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်လည်းရောက်ပြီဆိုတော့ မြန်မာလူမျိူးတို့ရဲ့ ဓလေ့ရိုးရာအတိုင်း လူကြီးမိဘတွေကို ဂါရဝပြုဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘာဝယ်ပြီးကန်တော့ရမလည်းလို့တွေးနေရတာ ခေါင်းကိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်မခံပါနဲ့။ အောက်မှာသာ ဆက်ပြီးဖတ်လိုက်ပါ။လမ်းညွှန်လေးရေးပေးထားပါတယ်။ လူကြီးမိဘတွေအတွက်လက်ဆောင်ဝယ်တဲ့နေရာမှာ- ၁။မိမိရဲ့ သုံးနိုင်တဲ့ငွေအတိုင်းအတာပမာဏကိုကြည့်ပါ။ လူကြီးတွေဟာ နှမြောတတ်ကြပါတယ်။ စျေးကြီးပြီး သူတို့အတွက် အသုံးမဝင်ရင်အလကားပါပဲ။ အိုဗာတင်း၊...